China Empty Diamond Milo yePlastiki Cream Jar umzi-mveliso kunye nababoneleli |Sengmi
Inombolo yoMzekelo: A31
IJar yePlastiki engenanto eyenziwe ngeDayimane emile kabini yePlastiki yeCream.
Yenziwe ngezinto eziphezulu ze-Acrylic, ubunzima obulula, kulula ukuyiphatha
Inkangeleko entle, ulwakhiwo olungangenwa ngumoya.
A31 I-Acrylic Cream Jar
Izinto eziphathekayo Acrylic + ABS + PP
Malunga neXabiso Kuba abathengi banezicelo ezahlukeneyo zokwenza, ixabiso elidwelisiweyo lisalathiso sale ngqayi ngokwemizobo njengoko kubonisiwe kwimifanekiso.Nceda uyicacise indlela ofuna ukuba iqhutywe ngayo ukuze ufumane ikowuteshini yokugqibela.
Le ngqayi ye-acrylic emile njengedayimane inemisebenzi emininzi.Isetyenziswa kakhulu kwimizi mveliso yokuthambisa kunye neyesikhumba.Ingasetyenziselwa ukugcina ikhrimu yobuso, ikhrimu yamehlo, i-lip balm, i-lip scrub, imaski yodaka, umgubo omenyezelayo, ibhotolo yomzimba, i-ointments, iisalifu, njl.
Screw cap inceda ukwahlula imveliso yakho kuko nakuphi na ungcoliseko lwesibini.Isivalo sangaphakathi sengqayi singumncedi wokuthintela nakuphi na ukuvuza kunye nokuchitheka.Umzimba weJar ongqindiweyo womelele kwaye womelele ngokwaneleyo ukunqanda nawuphi na umonakalo onokwenzeka.Ukuwa ukumelana.
Le Jar yeDayimane eNcinciweyo yePlastiki eyenziwe nge-Acrylic, enokumelana nokuqhekeka, ukuqhekeka kunye nokulwa.
Ihlala ixesha elide, iyathungwa, i-eco-friendly, inokuphinda isetyenziswe.
Ngokwesiqhelo sigcina isitokhwe seemveliso zethu kwindawo yokugcina iimpahla ukuze sihlangabezane nesicelo esingxamisekileyo sonikezelo nge-MOQ EPHANTSI.
Unokukhuphela uluhlu lwesitokhwe ukujonga iinkcukacha ezithe kratya, kwaye ukuba ufuna naliphi na icebiso nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi:
Ngaphambili: IBhola Emilise Emhlophe Ye-Akriliki YeJar
Okulandelayo: Isithsaba seGold Acrylic Jar yeCream
60ml Airless ibhotile, Ingqayi engenamoya, Ibhotile yesirinji engenamoya, Ibhotile yeToner yesilwanyana, Airless Black ibhotile, Ibhotile engenamoya eNtofontofo,